Ugu dambeyntiina, agaasimihii guud ee Disney, Bob Iger wuxuu ka tagayaa booskiisa guddiga Apple | Wararka IPhone
Ugu dambeyntiina, agaasimihii guud ee Disney Bob Iger ayaa ka degay guddiga sare ee Apple
Tan iyo markii ay Apple iyo Disney qorsheynayaan inay abuuraan adeeg muuqaal fiidiyoow ah ayaa lagu dhawaaqay, wax badan ayaa laga sheegay oo ku saabsan suurtagalnimada in Madaxa Sare ee Disney, Bob Iger uu ka tag booskiisa guddiga maamulka Apple.
Agaasimihii guud iyo madaxweynihii Disney ayaa iska casilay guddiga maamulka Apple, sida lagu sheegay bayaan ay Apple u dirtay SEC, guddiga amniga iyo sarrifka Mareykanka. Iger wuxuu iska casilay xilkiisii ​​bishii Sebtember 10, isla maalintaas Apple ay si rasmi ah u shaacisay taariikhda la bilaabayo iyo qiimaha adeegga fiidiyowga ay ku baahineyso.
Waxay noqon doontaa Nofeembar 1 marka Apple TV + uu howl galo wuxuuna sameyn doonaa kaliya 4,99 euro bishii. Haa, haddii aad iibsato iPhone, iPad, iPod ama Mac, Apple waxay ku siin doontaa adeegga gebi ahaanba bilaash ah sanadka ugu horeeya.
Iger wuxuu sheegay bishii Abriil ee la soo dhaafay in Uma maleyneynin doorkiisa guddiga Apple ee agaasimayaashu inay tahay mid aan waxtar lahayn macno ahaan, tan iyo markasta oo laga wada hadlo arrimaha la xiriira adeegga fiidiyowga qulqulka, Iger ayaa ka tagaya kulanka. Iger wuxuu yiri taasi waxay dhacday marar aad u yar, maadaama waqtigaas, ganacsiga telefishanka uu wali aad ugu yaryahay Apple marka loo eego qeybaha qalabka.
Laakiin mar haddii la shaaciyay taariikhda la bilaabayo adeegga fiidiyowga ee Apple soo dejinaya in la beddelay oo Apple ay rabto diiradda saar dadaalkaaga mustaqbalka dakhligaan cusub laga helo qaybta adeegyada.
Iger wuxuu markii ugu horreysay ku biiray guddiga maamulka Apple ee 2011, hal bil kadib markii uu dhintay Steve Jobs, Agaasimihii hore ee Apple. Markii uu baxay Iger, guddiga agaasimayaasha Apple waxay ka kooban yihiin toddobo xubnood (Art Levinson, James Bell, Al Gore, Tim Cook, Andrea Jung, Ronald Sugar iyo Susan Wagner), taasoo ka dhigaysa mid ka mid ah shirkadaha teknolojiyadda ee leh jagooyinka ugu yar guddiga dhexdiisa. agaasimayaasha.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » dhowr » Ugu dambeyntiina, agaasimihii guud ee Disney Bob Iger ayaa ka degay guddiga sare ee Apple
Maalinle - Cusboonaysii jadwalka iyo talooyinka cusbooneysiinta